Zọ ndị njem nlegharị anya na Madrid | Akụkọ Njem
Foto | Ọ D Daily MMA kwa ụbọchị
Na mgbakwunye na ịbụ isi obodo Spain, Madrid bụ obodo mepere emepe, nke jupụtara na mbara igwe ma nwee ndụ nke nwere ọtụtụ ọrụ iji nye ndị ọbịa ya. Onye njem ọ bụla batara n’obodo ahụ na-eme nke ahụ maka ebumnuche dị iche: ọmụmụ, azụmahịa, oge ezumike ... ụfọdụ na-achọpụta ya na nke mbụ ya na ndị ọzọ na-ekwughachi.
Maka ụfọdụ yana maka ndị ọzọ, ụzọ ndị njem na-esi na Madrid gafere bụ ụzọ magburu onwe ya iji mata ya dịka ha bụ isi iyi nke ihe ọmụma yana dịkwa egwu. Isi obodo nwere ọtụtụ isiokwu ịhọrọ site na. You nwere ike ịme otu n'ime ihe ndị a?
1 Routezọ Krismas
2 Ntughari site na Barrio de las Letras
3 Mzọ Mystery
4 Utezọ site na akụkọ ihe mere eme n'etiti Madrid
Ekeresimesi bụ otu n’ime oge pụrụiche n’afọ, ọkachasị Madrid na-ebiri ọ withụ nke ukwuu ma na-agba mbọ kwa afọ iji chọọ okporo ámá mma maka ihe ọhụụ mere ndị njem na ndị obodo ji ju ndị njem anya.
Madrid na-enwe mmasị na ekeresimesi, nke bụ ya mere na otu afọ o nwere ọrụ a na-achọsi ike nke a maara dị ka Naviluz. Busgbọ ala na-emeghe ụzọ abụọ nke na-agafe n'okporo ámá ndị bụ isi na ụzọ nke ebe akụkọ ihe mere eme na-atụgharị uche n'egwuregwu nke ọkụ, agba na ụdị nke ejiri chọọ obodo ahụ mma n'ụbọchị a pụrụ iche.
Nke a bụ otu n'ime ụzọ njem nleta kachasị ewu ewu na Madrid, ya mere, ọ dị mkpa ịenta ntị na ụbọchị mmalite nke ọrụ a, nke a na-ekwenyebeghị n'ihu ọha, n'ihi na n'afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-ere ebe ngwa ngwa. A na-ahazi Naviluz ịmalite ụzọ ya site na Tọzdee, Nọvemba 28, wee jee ozi ruo ụbọchị ndị eze atọ.
Ọzọkwa, n’afọ a, ụzọ ọzọ nke njem ndị njem site na Madrid metụtara Krismas nwere ihe gbasara ọdịnala ihe atụ ọdịnala ọdịnala. na na oge nke ọzọ Christmas ga-arụnyere na Puerta de Alcalá, yana Puerta de Toledo, Puerta de San Vicente, Plaza Mayor na Viaducto de Segovia.
Ntughari site na Barrio de las Letras
Foto | Onye nnabata Oriente
Ikwu okwu na Madrid na ekwu maka omenaala. Na-esote Madrid Art Triangle (Museo del Padro, Museo Thyssen-Bornemisza na Museo Reina Sofia) anyị na-ahụ agbata obi na-eku ume akwụkwọ, nke a na-akpọ Barrio de las Letras.
Ọ na-enweta aha a n'ihi na ọtụtụ ndị edemede Spanish buru ibu biri na ya n'oge narị afọ nke XNUMX na XNUMX: Lope de Vega, Cervantes, Góngora, Quevedo na Calderón de la Barca.
Buildingsfọdụ ụlọ adịwo ndụ n’oge ahụ, dị ka Casa de Lope de Vega, chọọchị San Sebastián ma ọ bụ ebe obibi ndị nọn nke Atọ n’Ime Otu Barefoot (ebe ili Cervantes dị).
Ndị so dee akwụkwọ a pụtakwara corral mbụ na-atọ ọchị dị ka El Príncipe (nke bụzi Thelọ ihe nkiri nke Spanish), ebe a na-ebi akwụkwọ dị ka nke Juan de la Cuesta ma ọ bụ ndị isi nke ndị ọchị.
Mgbe e mesịrị, na narị afọ nke XNUMX, ụlọ ọrụ ndị a ma ama dị ka Royal Academy of History ma ọ bụ Chamberlọ Ọrụ Azụmaahịa na Mmepụta nke Madrid (ụlọ abụọ mara mma) dị na Barrio de las Letras. Na narị afọ ndị sochirinụ isi ụlọ ọrụ nke Madrid Athenaeum, Hotel Palace na Obí nke thelọikpe, ga-abata.
Nke a bụ otu n'ime ụzọ njem nlegharị anya kachasị mma na Madrid iji chọpụta Madrid edemede nke Golden Age, oge nke ịma mma nke asụsụ Spanish. Ọ bụkwa ebe ị ga-akwụsị n'ụzọ iji nwee ọ gastụ gastronomy nke Madrid nke sitere na ọdịnala na nke kachasị ọhụrụ na kichin. The Barrio de las Letras juputara na ụlọ mmanya na ụlọ nri nwere ọtụtụ ikuku.
Ọ dịghị ụzọ kacha mma iji mara obodo karịa ịlafu n’okporo ámá ya, ọbụlagodi na ndị ahụ bụ akụkọ mgbe ochie na ihe omimi. Ebe akụkọ ihe mere eme nke Madrid jupụtara na ha.
Anyị ga-ebido na imlọ nke asaa Chimneys ama ama, ezigbo njem njem maka ndị hụrụ paranormal. Ekwuru na n'ụlọ a dị na Plaza del Rey abalị ụfọdụ, mmụọ nke onye hụrụ Eze Felipe II n'anya pụtara n'elu ụlọ.
Site kwa na ulo nke nwere mmuo rue otu nke onu onu di: ulo Madrid a buru onu di na Antonio Griso Street, onye mgbidi ya huwo oke ojoo. Fọdụ na-ekwu na, kemgbe ihe omume ndị ahụ, a bụrụ ọnụ na ihe onwunwe.
Na Plaza de la Paja anyị nwere ike ịmata akụkọ mgbe ochie na-agagharị na Mudejar Tower nke Churchka San Pedro El Viejo. Ọ bụ kwuru na mgbịrịgba mbụ na ụlọ elu ahụ etinyebere ebe na-enweghị onye ga-eburu ya gaa n'elu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụghị akụkọ omimi niile nke Madrid agbanweela n'otu ụzọ ahụ oge ụfọdụ na ụfọdụ n'ime ha yiri ka ha so na akụkụ nke ezigbo akwụkwọ.
A kpochapụwo na akụkọ mgbe ochie na ihe omimi nke Madrid bụ Palacio de Linares, na Plaza de Cibeles. Ọ bụ kwuru na a mọ bi n'obí na ọbụna psychophonies nwere ike ịnụ.
Utezọ site na akụkọ ihe mere eme n'etiti Madrid
Madrid, isi obodo Spain, nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye na ụzọ ị ga-esi gafere n'etiti akụkọ ihe mere eme ga-eme ka anyị mata ebe nrụọrụ ya kachasị egosipụta.
Zọ njem ahụ nwere ike ịmalite, dịka ọmụmaatụ, na Plaza de la Independencia, nke na-egosi ebe abụọ dị oke mkpa maka ndị bi na Madrid: Puerta de Alcalá na Parque del Retiro. N'iso n'okporo ámá Alcalá, anyị rutere Plaza de Cibeles, ụlọ nke ihe osise a ma ama na Halllọ Nzukọ Obodo. Mgbe ahụ, anyị gafere Gran Vía na nnukwu ụlọ ya n'etiti narị afọ nke 0 na nke XNUMX. Inweta Calle Montera, ị ga-erute Sol, kilomita XNUMX nke isi obodo ebe ihe osise a ma ama nke Bear na Strawberry Tree, bụ akara nke obodo ahụ.
Ọtụtụ n'okporo ámá ịzụ ahịa a ma ama na-amalite site na Puerta del Sol, dị ka Calle Preciados, Calle Arenal ma ọ bụ Calle Carretas. Mana n'okporo ụzọ a na-aga Madrid, anyị ga-aga n'ihu na Calle Mayor ruo mgbe anyị rutere Plaza Mayor, ebe ọzọ kachasị ama na etiti akụkọ ihe mere eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Zọ ndị njem nlegharị anya na Madrid